ekhaya > Travel Europe > Apho Ukufumana Yurophu Uninzi Magnificent Architecture
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/12/2020)
Ukujonga ukuze ubone ezinye izakhiwo libalaseleyo kwi iholide yakho elandelayo? Ukuba kunjalo, akukho mhlawumbi akukho indawo engcono kunokuba Europe kuwe. Enoba ukuba babe nomdla izimbo bokwakha lwamandulo okanye enethemba ukufumana ezinye walenza-yaziwa nezinto, imizi yaseYurophu na enento. Makhe jonga kwi eminye imizekelo izakhiwo buvele phi ukubona konke:
ElamaTaliyane izele izixeko needolophu encinane apho lahleka ukugcina izakhiwo ezihle. Enoba ku eRoma okanye Florence, phantse zonke ikona ulingana umfanekiso. Kuba abakhenkethi befuna kwiidolophu ezincinane gorgeous, Vicenza uyiyona indawo ekuyiwa kuyo. close It ngokuthi xa sele ukuthatha uloliwe okanye ukusuka eVenice, ephinde ulingana tyelelo. Nangona noVincenza ke babedume yayo Renaissance style bokwakha engekakhawulwa ingqondo Andrea Palladio, izakhiwo yelo kudla yesiGothic, cacisa, kwaye esihle.
France ayikho ekhaya ukuya kwizixeko ezimbalwa afunisele ngokubanzi iintlobo eziya kushiya naliphi Magnificent Architecture lover kanzima. Phakathi abaviwa inkulumbuso ukuba kutyelelo, eStrasbourg, Bordeaux, yaye Paris ukuba banikele kakhulu.
Kukho ezininzi ubuncwane bokwakha ukuba kungafunyanwa Jemani . kunjalo, ezimbini abo onomtsalane kakhulu Berlin no Rothenburg. Architecture abadli isandla ngesandla nge kwimbali, kwaye ungabona oku ngokucacileyo eBerlin. Isixeko wahlukene kanye, kwaye ibonakala ngokucacileyo kwezinye iindawo. Loo nto yenza kube indawo enkulu amava izinto ezahlukeneyo izakhiwo yehle nzulu kwi eyimbali impembelelo art.
Kwelinye icala, Rothenburg yindawo ngathi Kwathi ngqo ngaphandle intsomi. le ndibulala, kwidolophu medieval-ekhangela is a abakhenkethi ozithandayo. Yinto ngumzekelo obalaseleyo ezintle izakhiwo aphakathi yaseYurophu kunye neendonga zawo dolophu kunye nophahla ezinophahla.
EYurophu Kubalulekile uhamba nge, kwaye kukho nezinye iindawo ezininzi ezintle ukuba kufuneka sizame ukuba ahambele. izakhiwo Zobungangamela inamandla England, Bheljiyam, Ostriya , Swiden, kwaye i elamaDatshi njengokuba.